You na-emeso iwu ụgbọ njem? | Law & More B.V.
Iwu ụgbọ njem
Ngalaba lọjistik na - arụ ọrụ ma na - akpụgharị mgbe niile. N'ihi azụmahịa ụwa zuru ụwa ọnụ, a na-ebugharị ọtụtụ ngwongwo n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Nke a nwere ike ịgụnye ụgbọ njem site n'oké osimiri, okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè na ikuku. Ọtụtụ ndị otu dị ka ndị ahịa, ndị na-ebugharị ụgbọ, ndị na-egbochi, ndị mkpuchi na ndị nnata na-etinye aka na usoro a. E kwuwerị, ndị dị iche iche na-anata ma na-ebugharị ngwongwo.
ARÈ NA-EKWU EKWU NA-EGO?
Ọ bụ ezie na usoro njem a anaghị ebute nsogbu maka ndị a niile, mgbe ụfọdụ ọ ka nwere ike na-emebi. Mgbe ụgbọ njem abịarute na-akwụsị, a na-egbu oge ma ọ bụ na ngwongwo mebiri emebi ma ọ bụ fuo ụzọ, ajụjụ nwere ike ibilite n'etiti otu ahụ. Isnye mere ya ga-eji kwụọ ụgwọ ihe ndị mebiri emebi? Gịnịkwa ka a ga-eme ma ọ bụrụ na nnọkọ oriri na ọ doesụ simplyụ emezighị onwe ya? Azịza nke ajụjụ ndị a ga-ebu ụzọ chọta web nke nkwekọrịta n'etiti ndị a niile.
Na mgbakwunye na nkwekọrịta n'etiti ndị otu ahụ, a ga-eburu iwu nke mba ụwa mgbe ha na-eleba anya n'okwu gbasara njem njem. E kwuwerị, ụgbọ njem na-ewerekarị mba ofesi ma si otú a gafere mba dị iche iche. Iwu mba ofesi na-arụ ọrụ dị mkpa. Mgbakọ mba nile nke a ga-etinye na-adabere n'ụzọ nke ebu. Dịka ọmụmaatụ, Mgbakọ Hague-Visby Rules metụtara ụgbọ mmiri na Mgbakọ Montreal metụtara ụgbọ elu. Dịka ọmụmaatụ, mgbakọ CMR dị mkpa na mbufe ụzọ.
Agbanyeghị, ọbụghị naanị mba na-achịkwa iwu njem. E tinyekwara ikike dị iche iche na usoro iwu ụgbọ njem. Iji maa atụ, enwere mgbagha doro anya n'etiti iwu njem na iwu ọrụ, iwu nkwekọrịta, iwu ụlọ ọrụ yana iwu mba ụwa. E kwuwerị, dịka ọmụmaatụ, onye na-ebu ụgbọ ala na-eji ọrụ dị ala nyere ikike ka enye ndị na-ebupu ibu ihe. N'ime ọnọdụ ndị a, okwu metụtara iwu ụgbọ njem nwekwara ike ibilite. Na-emeso ụdị okwu a? Yabụ na ịmara ọhụụ nke iwu banyere ihe ndị a kpọtụrụ aha dịkwa mkpa.
N'iburu n'uche ihe ndị dị n'elu, ngalaba ngwa agha dị karịa usoro niile ma ekwesịrị iburu n'uche ọtụtụ akụkụ. Na Law & More anyị ghọtara na lọjistik gụnyere ọdịmma zuru oke, na Netherlands na Europe, yana ụwa niile. Ọ bụ ya mere anyị ji chee na ọ dị mkpa ibute ụzọ tupu nsogbu ndị nwere ike ime site na ịbịpụta nkwekọrịta (ụgbọ njem) yana usoro na ọnọdụ niile. O nwere ike, dịka ọmụmaatụ, chịkwaa ma ọ bụ wezuga ibu ọrụ gbasara nsogbu dị iche iche gbasara njem njem.
You na-emeso mbibi ebu, usoro, nnakọta ụgwọ ma ọ bụ nsogbu n ’ọnọdụ nke iwu njem? Ọbụna mgbe ahụ Law & More otu diri gi. Ndị ọka iwu anyị abụghị naanị ndị ọkachamara na ngalaba nke iwu ụgbọ njem, kamakwa na mpaghara iwu ndị ọzọ metụtara ya. You nwere ajụjụ ọ bụla ọzọ? Biko kpọtụrụ Law & More.